Umxube weCorgi Beagle: Kwenzekani lapho okuphikisayo kuheha - Izinhlobo
Umxube weCorgi Beagle: Kwenzekani lapho okuphikisayo kuheha
Kufana nebhotela lamantongomane ne-jelly, noma i-pizza yophayinaphu - kulungile, mhlawumbe leyo eyokugcina yimina nje, kodwa ukuxubana kweCorgi Beagle yi-canine yabantu abathanda izinja ezingasile kodwa ezingenakuvinjelwa.
Futhi kubizwa Beagi , izimfanelo zalolu hlobo kunzima ukuzibikezela, kodwa asikwazi ukucabanga okuhle nokubi kuzo zonke izinhlayiya. Ngizobeka amathuba, ukuze unqume ukuthi ngabe le hybrid ingeyakho.
Yazi i-Corgi Beagle Mix
ICorgi Beagle ihlangana nomama nobaba
Ngabe ukubukeka kweBeagle Corgi kubukeka kanjani?
Isimo seCorgi Beagle: Umngani omkhulu obukade umfuna
Ungayinakekela kanjani inhlanganisela yeCorgi Beagle?
Impilo: Umxube weCorgi Beagle uhlala isikhathi esingakanani?
NginguBeagi-ning ukuthandana: Ngingayitholaphi imidlwane yeCorgi Beagle edayiswayo?
Thola ukulungiswa kwakho kweCorgi ngenye ingxube eyigugu
AmaCorgi Beagles izinja eziyizithutha ezinokuzibophezela okukhulu
Akunakuphikwa ukuthi izinja zomklami zithandeka kanjani. Ngokuyinhloko uthola okungcono kokuzalwa okumsulwa okubili!
Kepha akuzona ezabantu abazonda ukumangala ngoba imidlwane enqamulelayo ingakhula izuze ukubukeka nobuntu bomzali oyedwa komunye.
Njengoba imvelaphi yenhlanganisela yeBeagle Corgi ingaziwa, singayiqonda kangcono le fido ngokufunda ngomzali ngamunye.
Amabhungane ama-hound-eared hounds aqhamuka ezinjeni ezincane, ezizingelayo zokuzingela ezivela eNgilandi ngesikhathi sama-1500s.
Ngaphandle kokwazi njengabangane abathembekile, labo ikhala elinamandla nezwi elimnandi zazisiza kakhulu ekulandeleni nasekuzingeleni onogwaja lapho befika e-US ngemuva kweMpi Yombango.
Konke kwaqala ngenja egama linguBlunder - iBeagle yokuqala eyaziwa yi-AKC ngo-1885. Manje, lolu hlobo yilona 6th ethandwa kakhulu emhlabeni we-canine!
Ubuwazi ukuthi kukhona izinhlobo ezimbili zeBeagle ? Kukhona labo abanobude obungaphansi kwamasentimitha ayi-13 kuphela (33 cm) futhi abakwazi ukukala ngaphezu kwamakhilogremu angu-9. Abanye bababiza ngePocket Beagles.
Hlangana nenja yeBeagle
Okunye ukuhlukahluka kungaba ngamasentimitha angu-13 kuye kwangama-15 (33 kuya kuma-38 cm) ubude futhi kungaba nesisindo samakhilogremu angu-9 kuye kwangama-30 (okuyisilinganiso esilinganiselwe salolu hlobo.
Akunandaba nosayizi, lokhu kuyi- i-canine eqinile futhi eqinile ngempilo yeminyaka eyi-10 kuye kwengu-15.
Bangaziwa ngokuthandwa 'ngama-paw pals', kepha futhi banezinye izici njengokuthanda izinja ezithandekayo, ezihlekisayo nezinobuhlakani ezibenza babe yimfuyo enhle kakhulu yomndeni. Akumangalisi ukuthi iningi labantu lifuna lolu hlobo! Ubani ongathi cha kulobobuso obuncengayo bomdlwane?
Leli cutie lidume ngezindlebe zalo zamalulwane, imilenze emifushane, kanye ne-butt ebunjiwe, emise okwenhliziyo. Kepha kufanele wazi ukuthi zikhona izinhlobo ezimbili zeCorgis : i IPembroke Welsh Corgi kanye ne- ICardigan Welsh Corgi .
Ngokuvamile, anokuphakama kwamasentimitha ayi-25 kuye kwayi-12 (25 kuya ku-30 ​​cm). IPembroke ingaba nesisindo esingamakhilogremu angama-28 kuye kwangama-30 (13 kuye ku-14 kg), kanti iCardigan inesisindo samakhilogremu angama-25 kuye kwangama-38 (11 kuye kwayi-17 kg).
Abaningi umehluko obonakalayo phakathi kwalokhu okubili yizindlebe ezikhonjiwe zePembrokes nomsila oboshiwe, kuyilapho amaCardigans enezindlebe eziyindilinga nomsila omude.
Ungakhohliswa ukubukeka okuthandekayo nokunyakaza kwe-hoppy kwalolu hlobo. Kunesizathu sokuthi kungani iNdlovukazi u-Elizabeth II waseNgilandi engazange abe ngaphandle kweCorgi kusukela ngo-1993.
Hlangana nenja yeCorgi
Bangama-canine ahlakaniphile futhi anothando nawo angabadlali, azimele, futhi angesabi.
Okwalabo ababuza ukuthi iCorgi iyi-hound yini, abayona. Lezi zinja ezincane zikhona abelusi bezinkomo ifakwe ibhakede 'enkulu inja', futhi izinja eziqaphile, futhi!
Noma beza ngephakeji elincane, uCorgis uzokumangaza ukuthi bashesha futhi bashesha kangakanani.
Kuyamangaza futhi ukuthi ngaphandle kwezinkinga zezempilo ezihlobene nomzimba wabo omude, banesikhathi sokuphila seminyaka eyi-12 kuya kwengu-15.
Izinja zeBeagi ngokuvamile zinekhanda eliyindilinga futhi zingaba nezindlebe ezilengayo njengeBeagle noma ziqonde njengomzali wayo weCorgi. Baziwa ngamehlo abo ayindilinga nge-hazel emnyama nombala onsundu, njengomlingiswa omuhle we-Disney puppy.
Banomzimba omude weCorgis onemisila egobele phezulu, kepha lapho belalelisisa, ingaqonda ngqo.
Hlangana ne-Harley, i-Beagle Corgi Mix Dog - Umthombo Wezithombe
Isiphambano seCorgi-Beagle sikhulu kangakanani?
AmaBeagis akhule ngokugcwele anokuphakama okusuka ku- Amasentimitha angu-10 kuya kwangu-16 (Amasentimitha angama-25 kuye kwangama-41) futhi unesisindo nxazonke Amakhilogremu ayi-10 kuye kwangama-20 (4.5 kuya ku-9 kg).
Ukuhlanganiswa kweCorgi & Beagle kuyinja encane enomzimba omfushane okhangayo kodwa onempilo.
Ngenxa yobukhulu bawo, le ngxubevange ikwazi ukuzivumelanisa nokuphila kunoma yiluphi uhlobo lwendlu, ngisho nasendlini.
Mane ukhumbule ukuthi le fido inabazali abakhuthele, ngakho-ke kuzodinga nesikhathi sokuhamba ngokukhululeka ngaphandle. Noma kunjalo, sincoma lokhu kwehliswa kulabo abanamagceke abiyelwe ngokuphepha .
Ijazi nombala: Ngabe inhlanganisela yeBeagle Corgi iyachitha?
Njengoba iCorgi neBeagle bengeyona i-hypoallergenic, inzalo yabo yeBeagi izofana. Eqinisweni, le canine iyi- umchithi olinganiselayo , ngakho-ke kungcono ukuthi uzilungiselele ngesikhathi sokuchitha (ukuwa nentwasahlobo).
Isiphambano seCorgi neBeagle sinengubo eboshwe kabili engaba mfushane noma ibe maphakathi ngobude.
Ungayithola le nja yomklami othandekayo ngemibala ehlukahlukene, futhi. Bangakudla njengefa ukubukeka okuvamile kukaCorgis ngejazi elimhlophe nelolintshi, elinomugqa omhlophe ogijima emakhaleni alo. Noma, bangangena ngesiginesha ye-tricolor coat yama-Beagles.
I-Beagis ingabuye ibe noboya ngemithunzi ye-fawn, i-sable, i-chocolate tricolor, emnyama ne-tan, emnyama nomhlophe, obomvu nomhlophe, onsundu, nomhlophe, i-merle eluhlaza okwesibhakabhaka, nokuningi!
Izingxube zeCorgi Beagle zinobuntu obunobungane ukufanisa ukuhamba kwazo okubhampayo kanye nesimo sengqondo sokuzikhukhumeza.
IBeagi ekhuliswe kahle futhi eqeqeshwe kahle okuhle nezingane , imindeni, nanoma yimuphi umuntu elihlangana naye. Bathanda ukunakwa futhi bavame ukuntshontsha indawo lapho kungenzeka khona.
ICorgi Beagles izosazisa isibopho esinaso nawe, kepha ngenxa yabo isici sokulangazelela ukujabulisa , umngani wakho onoboya uzokuhlonipha njengenkosi yayo kuqala.
Banjalo abangane abaqotho lokho kuzokwenza kube umsebenzi wesikhathi esigcwele ukukwenza ujabule futhi ubonise ukuthi bamthanda kangakanani umuntu wabo.
Ungavumeli lo mzimba omfushane futhi onesiqu se-fido ukukhohlise! Njengabazali bayo, iBeagi iyi- umsubathi wemvelo futhi inezinyanda zamandla.
Ungabamba izingalo zakho zokugijima zeCorgi Beagle, ukuthola ama-zoomies, noma ngisho nokubusa umdlalo wobungane wokulanda.
Ungaba nobuciko lapho uchitha isikhathi sangaphandle nale nja, njengoLily nabanikazi bayo kule vidiyo:
Nakhu kuza isass: Izingqinamba ezingaba khona zesimo
Kokubili amaBeagles noCorgis angaba nenkani , ngakho-ke ingxube yakho yeCorgi Beagle nayo ingazuza le mfanelo. Uma befuna okuthile, bazokulandela, noma ngabe uthini.
Zingahle zibe yindawo lapho kukhulunywa ngawe nomndeni wayo wabantu, futhi zenze sengathi zinkulu kakhulu kunazo.
Ngenkathi lokhu kungabenza izinja eziqaphile kakhulu , kungadala izingqinamba uma bezwa isidingo sokuthi 'bavikele' kwabanye abantu. Ngakho-ke kungcono ukuthi uqaphele.
Ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi lokhu kuwele kungahle kube nokukhathazeka ngokwehlukana , udinga ukwazi ukuthi ungabhekana kanjani ne- ukushayela okuqinile . Okusho ukuthi le doggo ayifanele amakhaya anamakati nezilwane ezifuywayo ezincane.
Ngenhlanhla, lolu hlobo lukhona uhlakaniphile futhi ukuqeqeshwa kalula . Ukuqeqeshwa kokulalela kanye nokuxhumana nabantu kungaqala emasontweni ama-2 ½.
Ngaphandle kokuchithwa, ngeke kudingeke ukhathazeke kangako ngoba iBeagi ithathwa njengendawo yokugcina ephansi ngokuya ngokunakekelwa.
Noma kunjalo, inja ngayinye inezidingo ezihlukile futhi eziqondile. Lokhu kwesinye isikhathi kungahle kube yisihlukanisi sokwenza isivumelwano nalabo abahlola isilwane sabo esilandelayo. Ngabe ucabanga ukuthi uzokwazi ukwenza konke lokhu uma uthola le fido?
Izeluleko Zokuzilungisa zeCorgi Beagle yakho
Njengoba sishilo ekuqaleni, iBeagi isakaza ngokulingene. Ukuze unciphise izinwele zezinja ekuthatheni ifenisha yakho kanye nasekhaya lakho, kuzodingeka ubhulashe ijazi layo Izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngeviki .
Amabhati njalo emavikini amabili kuya kwamathathu anele. Sebenzisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamazinga we-pH angathathi hlangothi enziwe ngokukhethekile kuma-canine, njenge imoto oatmeal .
Ikhala lakho leCorgi Beagle lingenye yezinto zakhe eziyigugu kakhulu, ngakho-ke lihlole njalo!
Amakhala abo angoma noma ahlukane ngenxa yezizathu eziningi, njengokushintsha kwesizini noma ukungezwani komzimba.
Uma uhlala unamanzi amaningi noma usebenzisa i- amafutha okuthambisa ngoba ukuhogela isilwane sakho akusebenzi, sekuyisikhathi sokuya kudokotela wezilwane.
Yize lokhu kungazwakala njengomsebenzi omningi, ukuzilungisa kukhuthaza ukubopha okunempilo. UBeagi wakho othandekayo uzothanda isikhathi esengeziwe nokunakwa enikusebenzisa nobabili.
Yini okufanele uyondle ngeCorgi Beagle yakho elambile?
Nikeza ukuxuba kwakho kwe-Beagle Corgi 1 ½ inkomishi yekhwalithi ephezulu eyomile nsuku zonke. Uma ungumzali we-paw okhetha ukubala inani le-caloric yansuku zonke edingwa i-pooch yakho ngokuya ngesisindo sakhe, ungakusebenzisa lokhu inja yekhalori yokubala .
Khumbula ukuthi uhlobo lokudla kwenja kanye nenani olinika isilwane sakho kufanele kususelwe eminyakeni yakhe, ubukhulu, izinga lomsebenzi, kanye nempilo .
Le nja yomklami ithambekele ukukhuluphala ngokweqile , ngakho-ke kungcono ukunamathela esimisweni sokudla bese uhlukanisa ukudla komngane wakho we-canine kabili.
Badinga ukuvivinya umzimba okungakanani?
Njengoba kushiwo, iCorgi Beagle iyinhlobo enezinga lamandla aphezulu elidinga lokho okungenani ihora elilodwa yokuzivocavoca nsuku zonke.
Umdlwane weCorgi Beagle onesithukuthezi ungalingisa. Uma ufuna ukugcina okhukho bakho nezicathulo ezigijimayo kucezu olulodwa, nikeza i-pup yakho amathoyizi asebenzisanayo lokho kunganikeza ukuvuselelwa kwengqondo nokuzijabulisa kuye.
Uma ukuhamba uzungeze umakhelwane noma uhambo oluya epaki yezinja kungenzeki, ukudlala ukulanda neBeagi yakho ngaphakathi noma endaweni evikeleke ngokwanele kuzokwanela.
Ukuhlanganiswa kweCorgi & Beagle kunesikhathi sokuphila se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 . Noma izinqwaba zemifantu ebhekwayo ibhekwa njengephilile ngenxa ye- umdlandla we-hybrid , kusengenzeka ukuthi lezi zinja zizuze njengefa izinkinga zempilo abazali bazo abangahlanzekile abangenzeka kuzo.
Izinkinga zezempilo zingalindeleka, kepha ezinye zezifo ezivamile ezitholakala kulolu hlobo yisifo sokuwa, ukungezwani komzimba ne-hip dysplasia.
Ngezinkinga ezibaluleke kakhulu, iCorgi ingadlulisa izifo zofuzo ezifana ne-canine glaucoma, Izifo zikaVon Willebrand , kanye nesifo se-intervertebral disc. Ngakolunye uhlangothi, iBeagi ingathola i-hypothyroidism ne-cherry ohlangothini lweBeagle.
Ingane yakho enoboya izoba nethuba elingcono empilweni ephelele yokugigitheka kwe-butt nokumamatheka ngokudla okufanele, ukuzivocavoca nsuku zonke, kanye nokuvakashelwa njalo kwezilwane.
Hlangana noBruno, iBeagi - Umthombo wesithombe
Ungajabula ukwazi ukuthi ungathola kalula imidlwane edayiswa online! Kepha kufanele uqiniseke ukuthi uthenga eyodwa kuphela kumfuyi onobuchwepheshe futhi onomthwalo wemfanelo.
Umuntu onakekela isifuba saso esizalayo kanye nodoti wabo ugwema ukuzala futhi ubeka inhlalakahle yezinja njengento ephambili.
Naye kufanele akulungele nikeza ngamarekhodi ezokwelapha nawokugoma lokho kuzofakazela ukuthi abazali bahlolwe ufuzo nokuthi baphile saka ngaphambi kokukhwelana.
Uma uzibuza ukuthi izindleko ze-Corgi Beagle mix puppy zibiza malini, isilinganiso samanani entengo sivela $ 200 kuya ku- $ 600 . Izinhlobo zomklami ziyimfashini futhi imvamisa ziyabiza, ngakho-ke iBeagi iyabiza impela.
Abalimi be-Corgi Beagle mix
Njengamanje, abekho abafuyi kanye nezindlwana ezizalela iBeagis, kepha ungabheka amawebhusayithi nezimakethe ezifana Imidlwane yaseBark Avenue , Imidlwane yaseGreenfield , futhi Imidlwane yaseLancaster .
Bangathengisa kakhulu amamiksi weBeagle, kepha ungaba nenhlanhla futhi uthole umdlwane wakho weBeagi!
Uma kungenjalo, phequlula imidlwane etholakalayo, futhi ungahle uthandane ne-furball encane lapho uqala ukuyibona.
Inhlanganisela yeCorgi Beagle yokwamukelwa
Kungakhathaliseki ukuthi i-purebred noma i-crossbreed, izinja eziningi zigcina ezindaweni zokukhosela ngezizathu ezahlukene.
Kungenxa yokuthi umnikazi uyahamba futhi akakwazi ukuletha inja, othile emndenini uyaphikisana noboya nedander, noma bangahle bangathandi ukuthi i-canine ivele kanjani ngokubukeka noma ubuntu.
Kuyisenzo esihle kakhulu ukuvula inhliziyo yakho nekhaya lakho ukwamukela ingelosi yoboya bese uyinika elinye ithuba lokuzwa ukuthi kunjani ukuba yingxenye yomndeni futhi uthandwe.
Ngaphandle kokubheka izindawo zakho zokukhosela zendawo, lawa mawebhusayithi weCorgis neBeagles nawo angaba neBeagi ongayitakula noma ukuyondla. Banokunye ukuxuba kweCorgi kanye nezinhlobo ezixutshiwe zeBeagle, futhi.
Ukusindiswa KweBeagle Tampa Bay (E-Tampa, FL)
Ukutakulwa KweColorado Beagle (ILittleton, CO)
Ukutakula kwe-East Coast Corgi (Washington, DC)
IMayflower Pembroke Welsh Corgi Club, Inc.
IPembroke Welsh Corgi Club of America, Inc. (PWCCA) ine- uhlu loxhumana nabo abahlanganyele ukutakula ukuthi ungabheka.
Nginqume ukuthi uma uxuba iCorgi nolunye uhlobo, uzogcina unohlobo olude, olunenkani lomunye umzali. Bheka lokhu kuhlangana okuhle kwe-Corgi:
UHorgi: Ukuhlanganiswa kukaCorgi Husky
UDorgi : Ukuhlanganiswa kweCorgi Dachshund
Corgipoo Umxube weCorgi Poodle
Ngeke ngihlukanise lolu hlobo njengokugcinwa okuphezulu, kepha ngokuqinisekile kuza nohlu lwezinto okufanele uzenze nokungafanele uzenze uma ufuna inja eziphethe kahle.
Babezokwenza yenza kangcono emndenini womndeni lapho bezothola ukunakwa okungapheli ukufeza izifiso zabo zenhlalo yabantu.
Yize bekwazi ukuzivumelanisa nokuhlala emafulethini, ngeke benze kahle endlini enezilwane ezifuywayo ezincane ngenxa yabo ukushayela okuphakeme .
Uma uzohambisana neCorgi Beagle, uzodinga hhayi kuphela inani elinempilo lamandla nothando kepha nokubekezela. Uzodinga ukwazi ukuthi ukwenza kanjani Woza futhi Hlala ngasikhathi sinye- mhlawumbe okuphikisanayo kuyakhanga.
Ngabe uyavumelana nakho konke lokhu? Uma unenhlanganisela yeCorgi Beagle, yabelana ngendaba yakho nathi ngokushiya amazwana ngezansi!
Umhlahlandlela wakho wokugcina wenja yokuxuba yeCorgi Golden Retriever
izinwele ezimhlophe ezinwele ezimhlophe zaseJalimane
imibala yomalusi waseJalimane emnyama & tan
umshayisibhakela oxutshwe nembibizane
ikhala elibomvu le-American pitbull terrier
i-alaskan husky ne-pomeranian mix